Tricolor CZ Divine Child Pendant (14K) – Popular Jewelry
Ka dukaamee Waqti
Tricolor CZ Ilmaha Ilmaha leh (14K)
Bir qaali ah: 14 Karat Tricolor
Dherer: 34 mm * (Waxaa kujira damiin)
Ballac: 17.05 mm *
* Xarig gooni ah ayaa la iibiyey *.
Marka la eego in dhammaan biraha dahabiga ah ee wanaagsan ay yihiin kuwo jilicsan oo la arki karo, waxay raacaysaa in dahabka iyo dahabka dahabiga ah in la gasho loona maareeyo daryeelka ugu weyn. Gaar ahaan tani waa kiisaska khafiifka ah, jilicsan ee dahabka qurxan, kuwaas oo u nugul la dagaallanka marka loo eego dhigooda culus. Qurxinta quruxda badan waa in laga saaraa jidhka kahor dhaqdhaqaaqa jimicsiga culus (sida shaqada dhismaha ama la xiriirka isboortiga) maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay ku dhegaan shay shisheeye iyo jeexan. Alaabada dahabiga ah ee qurxinta waa in sidoo kale laga saaraa kahor muujinta maadama kiimikooyinka adag ee ku jira shaambooyinka iyo wasakhda ay dhaawici karaan ama xitaa dhaawici karaan dahabka.
Waxaa si weyn lagu talinayaa in dahabka qalinku, markii aan la istcimaalin, lagu keydiyaa gudaha bacda hawo hawo ama weel. Kani wuxuu ka ilaaliyaa lacagta inay kiimikada ka falceliso arrimaha deegaanka (sida hawada hodanka ku ah oksijiinta; maqaarka aashitada) kaasoo haddii kale sababi lahaa in qalinku u xumaado oo uu lumiyo maqaarkiisa dabiiciga ah ee uurjiifka leh.
Gabal gabal ahaan qalin ah oo horeyba u burburay ayaa lagu soo celin karaa xaaladdii asalka ahayd si dhakhso leh iyada oo loo marayo xalka nadiifinta kiimikada, sida midka aan siinno. Qubeyska dhaqtarka ah ee labaatan iyo labaatanaad ee nadiifiyaha wuxuu ka saari doonaa lakabyada tarnish iyo xumaanta lacagta.
Iyo Hesho Ogeysiisyo Gaar ah iyo Waxyaabo Kale
Copyright © 1988 Popular Jewelry / Waxaa diyaariyey William Wong waxaana ilaaliya Kevin Wu